Filtrer les éléments par date : mercredi, 09 décembre 2020
mercredi, 09 décembre 2020 21:36
Pilo kely : Harena ny tsy fitoviana
Ny tonon-kira no aleo hiteny
- Anao niany e, tsy maintsy mandry aminahy
- Oh ry vorona iry e, etsy hafarako kely
mercredi, 09 décembre 2020 21:01
Lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana : Ny zoma 11 desambra ny fandaniana azy eo anivon’ny Antenimierandoholona
Nolanina androany alarobia 09 desambra 2020 nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehana, ny volavola-pandaharam-potoanan’ny Antenimierandoholona manomboka androany 9 desambra 2020 ka hatramin’ny zoma 18 desambra 2020, fotoana izay hoheverina hamaranana ity fivoriana ara-potoana faharoa ity .
Volavolan-pandaharam-potoana no nolaniana fa eo amin’ny fanatanterahana izany dia tapaky ny besinimaro fa ny volavolan-dalàna laharana faha 016/2020 tamin’ny 30 oktobra 2020 mikasika ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola-panjakana aloha no hodinihina sy holaniana fa ny ankoatra izay dia miandry ny fanapahan-kevitra avy any amin’ny Praiminisitra sy ny Minisitry ny toekarena sy ny vola mahakasika ny famahana ny olan’ny Antenimierandoholona.
Maherifody-Antalaha : Tovovavy iray maty tsy tra-drano main’ny herinaratra
Namono olona ny herinaratra tamin’ny fefy niarovana akoho amam-borona tsy ho lasan’ny mpangalatra tao Maherifody, Fokontany iray ao amin’ny Kaominina ambonivohitra Antalaha.
Tovovavy iray, 25 taona, no niangavian’ny mpifanolobodirindrina aminy mba hamoaka ny akoho amam-borona rehefa mazava ny andro, fa tsy ho eo an-toerana ny tompony.
Misy tariby mitondra herinaratra anefa napetak’ity farany amin’ilay fisoko, mba tsy horobain’ny mpanao halabotry ny akoho amam-borona ao.
Hadinon’io tompony io, ny nisintona ny herinaratra nialoha ny nandaozany ny trano. Ilay tovovavy niangaviana hamoaka ny ankoho amam-borona, tsy nanampo na inona na inona. Teo no nitera-doza.
Maty tsy tra-drano, main’ny herinaratra ilay tovovavy tamin’ny fotoana namoahany ireo akoho amam-borona niangaviana azy.
Notazomin’ny Zandary natao famotorana ny tompon’ilay fisoko nisy herinaratra nahafaty olona.
mercredi, 09 décembre 2020 20:41
Ankisatra-Maintirano : Fiaraha-misotro toaka niafara tamin’ny vono olona
Roa lahy mpinamana no niara-nisotro toaka tao Ankisatra ny 3 desambra 2020.
Tsy nody an-trano ny raim-pianakaviana iray, 35 taona, ka nahagaga ny fianakaviany. Roso tamin’ny fikarohana azy ireto farany ny marainan’ny 4 desambra 2020. Ankona ireo iraka raha nahita azy nitsirara efa tsy nisy aina intsony tao Ambahibe.
Ny andron’io ihany dia nampandre ny Zandary ny fianakaviana sy ny Fokontany. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Zandary, ka rehefa notsirihina niaraka tamin’ny mpitsabo avy ao amin’ny CSB2 Betanatanana ny faty dia nahitana ratra tamina zava-maranitra ny vatany.
Natao ny fikarohana ilay tovolahy, 22 taona, niara-nisotro tamin’ity raim-pianakaviana ity, izay ahiahiana ho nahavanon-doza.
mercredi, 09 décembre 2020 20:28
Maroantsetra : Mpanarato maty vokatry ny fihinanana trondro natao tsaky toaka
Lehilahy iray, mpanarato, 36 taona no nindaosin’ny fahafatesana ny 8 desambra 2020 tao Tsararivotra, Fokontany Navana, Distrika Maroantsetra vokatry ny fihinanana trondro natao tsaky toaka.
Nahazo trondro roa io lehilahy io. Botohanana no fiantsoana io karaza-trondro azony io, ary mila fikarakarana manokana vao azo hohanina.
Ny harivan'io andro io ihany anefa dia nataon'io mpanarato io masimasina na tsaky toaka ireo trondro roa ireo. Vokany, narary io mpanarato io ny alina, ary maty ny marainan'ny 08 desambra 2020.
Voamarin’ny mpitsabo avy ao amin'ny CSB II Anjahana sy solontena avy amin'ny asa fanjonoana ao Maroantsetra, ary ny mpitandro filaminana, tao aorian’ny fitsirihana fa maty noho ny fihinanana io trondro io ilay mpanarato.
Naverina amin'ny fianakaviana ny razana taorian'ny fizahana natao. Nentanina ny mponina tsy hihinana io karazan-trondro io.
mercredi, 09 décembre 2020 20:19
Vondrozo : 16 taona dia efa manao asan-dahalo
Notafihin’ny andian-dahalo mitam-basy tao Ambalabe/ Mahatsara Kaominina Ambodirano, Distrika Vondrozo, Faritra Atsimo Atsinanana, ny alin’ny 07 desambra 2020 tokony misasakalina.
Lasan’ireo dahalo ny omby miisa fito tao amin’ny fianakaviana iray, mpamboly.
Roso tamin’ny fanarahan-dia niaraka tamin’ny Fokonolona ny Zandary miisa telo, vao nahazo fampandrenesana.
Nifankatratra ny mpanaradia sy ny dahalo nony tao Arindrano Fokontany Ambohimandroso, Kaominina Mahazoarivo, Distrika Vondrozo ny maraindrainan’ny 8 desambra 2020.
Nisy ny fifandonana. Tafaverina avokoa ireo omby fito lasan’ny dahalo. Dahalo miisa efatra no azo sambobelona ka zaza tsy ampy taona, 16 taona, ny iray amin’ireo.
Tsy nisy voakitika na ny Fokonolona mpanaradia na ny Zandary.
Anatin’ny famotorana ireo dahalo ny Zandary ankehitriny.
mercredi, 09 décembre 2020 20:16
Namontana-Antananarivo : Noraisim-potsiny ireo mpivarotra basy
Olona miisa telo, manodidina ny 30 taona, ka vehivavy ny roa no saron’ny Zandary avy amin’ny sampana mikaroka heloka bevava teny Namontana Boriborintany faha-4 Antananarivo renivohitra, ny atoandron’ny 8 desambra 2020.
Mpanao trafika basy izy ireo. Nahitana basy poleta vita gasy miisa roa 7,65mm sy 6,35mm tamin’ny fotoana nahatrarana azy ireo.
Anatin’ny famotorana azy ireo ny Zandary ankehitriny, ary nogiazana avy hatrany ireo basy tratra tany amin’izy ireo.
mercredi, 09 décembre 2020 09:59
Rovan'i Manjakamiadana : Teti-bola tsy misy fetra ?
Ferana hatramin'ny ohatrinona moa izany ny fanamboarana ny Rovan'i Manjakamiadana na Rovan'i fanjakana Merina, sy ny famerenana ireo vakoka tao aminy? Sa Teti-bola tsy misy fetra na budget illimité, mbola maro manko ireo vakoka tamin'ny fanjakana merina mandedeha maneran-tany, fa ny an'ireo mpanjaka any amin'ny faritra ajanona trano kakazo foana satria tazonina amin'ny endriny fahiny?
Tsy resaka tsy fitiavana, na resaka foko, fa ampy kosa zay fanjakana merina ihany no fanjakana teto Madagasikara izay, mba omeo ny faritra hafa ihany koa ny anjara fananany fa tsy ny tantaran'ny fanjakana merina ihany no atao tantaran'ny fanjakana malagasy rehetra.
Lalana pavé 10km isaky faritra ve no mba budget omena ny faritra, nefa akanjo 1 vidiana miliara, aoka kosa zay e.
Mijoroa ianareo fianakaviana sy taranak'andriana merina, vidio ny vakoka mirakitra ny tantaranareo, fa aoka kosa tsy ny rehetra no hibaby an'izay e, nefa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ho an'ny faritra mbola trosaina ka ny taranaka no andoa azy.